Iviki elizayo uKhongolose angawa noma avuke ngalo - Bayede News
Iviki elizayo uKhongolose angawa noma avuke ngalo
UZikalala nesexwayiso kubasebenzi
UMengameli kumele akhethe phakathi kweKhabhinethi labavoti noma elabatshalizimali kanti KwaZulu-Natal uKhuzeni ugajwe abantu isithebe sincane
ISONTO esikulo liphele kukukhulu ukuqagela ngalokho okungahle kwenzeke kupolitiki yakuleli. Kusuka eqenjini elibusayo i-African National Congress (ANC) kuya kuNational Freedom Party (NFP) kwaZulu-Natal udaba lokuthi ngubani okhona ohlwini nongekho ibinkulu.
Indaba iqalwe nguloyo owayenguSomlomo wePhalamende uNkk uBaleka Mbete nowayenguNgqongqoshe Wezasekhaya uMnu uMalusi Gigaba bethatha isinqumo sokuhoxisa amagama abo ohlwini lwebutho likaKhongolose eliya ePhalamende.
Kuthe kungakapheli amahora angamashumi amane kwaqinisekiswa ukuthi nowayenguNgqongqoshe emiNyangweni ehlukene uNkk uNomvula Mokonyane naye uthathe leso sinqumo. Kepha okunyakazise izwe kwashiya ukukhuluma kube yisinqumo sikaSekela Mengameli wezwe nokaKhongolose uMnu uDavid Mabuza okuthe kungazelele muntu kwavela ukuthi weluleke iqembu ukuba kelime ngokufungiswa kwakhe njengelungu lePhalamende.
Lesi senzo noma umnyakazo njengoba abanye besho, sihumushwe ngezindlela ezehlukene. Kukhona ababuza ukuthi ngabe isinqumo lesi uMabuza uzithathele yena noma bekuyingcindezi. Kwenzeka konke lokhu nje, kunokukhuluma ngaphakathi ezinhlakeni zeqembu ukuthi yena nabanye balandelwa ngumsanka wenkohlakalo.
Echaza ngesenzo sikaMabuza ongumkhulumeli wakhe uMnu uThami Ngwenya uthe isenzo sikaMabuza sihambisana nendlela entsha yokwenza izinto ye-ANC nethi labo abasolwa ngenkohlakalo abaqhele ukuze bageze amagama abo. “Khumbula ukuthi kunendlela entsha yokwenza izinto ngakho izinhlelo kumele zilandelwe”, kusho uNgwenya.
Lokhu kukodwa kwabanye kubukeke njengomgoga uMabuza awumbela izimbangi zakhe naziyo ukuthi kungekudala nazo zingase zinukwe ngomsanka. Umnyakazo kaMabuza wenze kwanokubuza ekutheni ngabe uRamaphosa uzomnika yini ithuba lokuba ayolungisa igama lakhe uMabuza angaliqoki iSekela Mengameli. NgokoMthethosisekelo wezwe: “IKhabhinethi yakhiwa uMengameli, oba yinhloko yeKhabhinethi; uSekela Mengameli noNgqongqoshe.”
“UMengameli uqoka uSekela Mengameli noNgqongqoshe, abanikeze amandla nemisebenzi yabo futhi angakwazi ukubaxosha.”
“UMengameli kufanele aqoke uSekela Mengameli emalungeni ePhalamende Likazwelonke.
Lokhu kungahumusheka ngokuthi iKhabhinethi ayiphelele ngaphandle kukaSekela Mengameli okuyisibopho somthetho sokuba uRamaphosa aqokele isikhundla sokwesekela umengameli. Loyo onguSihlalo weKhomishini Yezobuqotho (Integity Commission) uMnu uGeorge Mashamba uthe ukuthi kwenzakalani kulabo amagama abo aqukethwe kumbiko wekhomishini aliholayo kuncike ku-ANC. Ngokwakhe ukusebenza kwalo kuphele ngesikhathi bedlulisela umbiko nowaphakamisa ukuthi amagama alabo ababhalwe kuwo bakhishwe ohlwini lwabaya ephalamende. “Konke sekungakubo. Amandla eKhomishini Lezobuqotho wukwenza izincomo kuNEC bese kuba yiyo enamandla okunquma ngalokho okuthinta amalungu ayo,” kusho uMashamba.
OlukaMabuza akuyona yodwa inzukayikeyi abhekene nayo uRamaphosa, enye yileyo yokuqoka ikhabhinethi nathembisa ukuthi alizogcina ngokubancane ngesibalo seminyango kepha uzoqoka abantu abanamava angena khaxa ezidingweni zezwe. Ingcindezi lapha ithi ngobani labo nokuthi ngabe bazokwamukeleka yini kuzinhlangothi zonke. Abatshalizimali nabamabhizinisi kuleli bayakuqinisa ukukhuluma okuthi ‘bafuna’ ikhabhinethi elingenasici.
Uma besho kanje kuyaziwa ukuthi basuke benganteli ngoba bayakwazi ukufaka izwe kuvobo uma kuwukuthi izinqumo ezithathwayo azihambisani nabo. Khona lapho kukhona eqenjini abangeneme ngokuthi izinqumo okumele zithathwe ngamalungu nangumengameli weqembu zithathwe ngabanye noma ngoba kujatshuliswa bona.
Kulindeleke ukuthi uRamaphosa amemezele ikhabhinwethi lakhe khona maduze nje nathembise ukuthi ‘lizokwanelisa bonke abantu’.
Ukuminyana kotshumo akukho kuzwelonke kuphela kepha nakweleNdlovukazi uMthaniya izinto ziyenzeka . Lesi sifundazwe esingesesibili ngobukhulu ngokuba nabavoti sesimqokile uNdunankulu waso omncane kunabo bonke ezweni. Loyo nguMnu uSihle Zikalala.
Kwabanye ukuqokwa kwakhe bese kuyinto yokugcina umthetho nje, njengoba bese kuyiziqubu lapho ebebamba khona njengoNdunankulu ngesikhathi uMnu uWillies Mchunu esekhefini.
Ulapha ekhona nje uZikalala usuka kude njengoba emuva kokuthatha kwakhe esokuba nguSihlalo we-ANC KwaZulu Natal kwasuka umdonsiswano nowaye waphelela eNasrec lapho isifundazwe sangenakhona ehlazweni lokuthi amalungu avela kusolesi angabibikho ebuholini bamalungu aphezulu ayisithupha e-ANC.
Emveni kwalokhu le nhlangano yathatha isinqumo sokulungisa izinto yakhe nobunye, nokuyinto okuze kube yimanje abasaphumelela ukuyenza.
Nokho kwabanye kukhona ukwesaba ukuthi uma kungacoshelelwa ekuqokweni kwamalungu esigungu sokuphatha sabaHlonishwa okulindeleke ukuba amagama amenyezelwe ngoMsombuluko kungahle buchitheke bugayiwe nenhlangano ibuyele emuva. Yize umthetho umnika amandla uZikalala ukuba aqoke amalungu, ipolitiki yangaphakathi ku-ANC iyaphoqa ukuthi lokho akwenze ngendlela yokuthi wonke umuntu azibone eyingxenye. Umbuzo uthi ngabe lokhu uzokwenza kanjani njengoba kubukeka abantu bebaningi kepha isithebe sisincane.
Uhlu olukhona lwenziwe nangamafumuka asephakathi eSishayamthetho nokungasho uguquko emakomitini. Phakathi kwamagama akhona awabaholi bentsha KwaZulu-Natal, uMnu uKwazi Mshengu, uNks uVuyiswa Caluza kanye nowake waba sesigungwini sikaVukayibambe nosewaqokelwa kubuholi besifundazwe, uNks u-Amanda Bani, uMu uRicardo Mthembu nabanye.
Iphikelelephi iNdlovu: Iqembu Inkatha emzabalazweni onzima kunayo yonke
Khona lapho kwenziwa uhlu amalungu aqoma ukuthunga iqembu ebese limantwenguntwengu ngesikhathi ephakamisa ukuthi uhlu lolu luxube labo ababeseka uMnu uSenzo Mchunu nalabo ababeseka uMnu uSihle Zikalala.
Lokhu kusho ukuthi uKhuzeni ekuqokeni kwakhe abaPhathiswa kuyomele aqinisekise ukuthi uphakela izinhlangothi zonke. Isibalo sabaPhathiswa silishumi nje vo, nokulindeleke ukuthi njengoba kungowesilisa onguNdunankulu kusho ukuthi abesilisa bazoba ba-4 kuthi abesifazane babe yisi-6. Lokhu kulandela isivumelwano esathi akube ngamaphesenti angama-40 abesilisa, nangama-60 kwabesifazane. Kulesi sibalo kumele axube intsha nabamkantshubovu.
Enye inkinga ekhona wukuthi uzobayisaphi laba abakhona manje okunguMnu uMxolisi Kaunda, uMnu uMthandeni Dlungwane, UNkk uWeziwe Thusi, uMnu uThemba Mthembu, uNkk uBongi MaSithole Moloi, uNkk uNomusa MaDube Ncube. Inkinga yalaba baholi wukuthi bangena ngezikhathi ezidlule ipolitiki isengokunye behola ezinye izinhlaka zeqembu okungasenjalo.
Uyedwa umuntu okubukeka kunesiqiniseko ngokuthi angaqokwa esigungwini nguMnu uRavi Pillay okunguyena yedwa ongeyena owoHlanga ohlwini. Kulokhu akukho mdeshi ohlwini lwe-ANC KwaZulu-Natal.
Yize kuke kwanokuphefumula ngesikhathi uMnu uMluleki Ndobe obephezulu ohlwini etholelwe inxiwa njengeSekela Somlomo abamesekayo abebelinde ukuthi angase naye abe nguMphathiswa zonke izinkomba zithi uKhuzeni angase aphoqeleke ukuba ayokhuleka kuzwelonke ukuthi athi ukwandisa kulaba besilisa mhlawumbe kufike emaphesentini angama-50 ukuze akwazi ukwaba izingqoko ngokucishe kulingane.
Asikho isiqinisekiso sokuthi abesifazane abakade balilinda leli thuba bangasivuma lesi siphakamiso uma sivela njengoba sekukhona ukuhhumuzela ngodaba lukaMadube Ncube osekukhona abakholwa ukuthi ushaywa ngesithende.
Kusuka ngesikhathi sikaMnu uSenzo Mchunu igama lakhe belihlala lisemlonyeni yabantu njengowesifazane onamava ukuthi usengaphatha isifundazwe esikhulu nesimqoka njengeKwaZulu-Natal.
Kulokhu akakwazi ukwenza iphutha ngoba njengoba uMsunduzi neTheku kusha nje, okunye ukungaboni ngasolinye kungabhebhethekisa umlilo isifundazwe sonke.
Nembala leli viki elizayo izinqumo zalo zingasho ukuzalwa kabusha noma ukushabalala kwephupho lobunye.
nguMfo waKwaNomajalimane Jun 21, 2019